admintriatra, auteur sur - Page 1144 sur 1810
Valanaretina Pesta : Mitantara ny nahazoany izany ny dokotera iray
18/10/2017 admintriatra 0
Isan’ireo toeram-pitsaboana mandray sy mitsabo ireo olona marary sy tratran’ny valanaretina pesta ny eny amin’ny hopitaly Ambohimiandra. Raha ny salan’isa voaray momba izany valanaretina izany, dia miisa 49 ireo marary niditra sy manaraka fitsaboana eny …Tohiny
Araka ny didim-panjakana laharana 2017-954 hanendrena ireo mpikambana ao amin’ny Antenimieran-doholon’i Madagasikara avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, dia voatendry ho loholon’i Madagasikara Rakotovao Rivo. Ny sekretera jeneraly eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, no namaky izany teny …Tohiny
Marin-toerana ny fifampitokisana ao amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Mitohy hatrany ny fikatsahana ny tombontsoam-pirenena amin’ny fivahinianana ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any Roma- Italia. Tompon’andraikitra telo indray no nihaona taminy omaly, izay samy nanamafy ny fiaraha-miasa, ka hitondran’ny …Tohiny
« Mamita-tena »
Mampalahelo fa lasa fotoana iray nentin’ireo mpanao politika sasany nisehosehoana iny fahalasan’ny filoha teo aloha Zafy Albert iny. Raha ny hita tetsy amin’ny Palais de Sport mantsy, dia ireo izay nifanohi-kevitra tamin’ny fotokevitra demokrasia napetrak’ity …Tohiny
« 1 … 1 142 1 143 1 144 1 145 1 146 … 1 810 »
Nisesy ny fahombiazan’i Madagasikara. Taorian’ny fahombiazana tamin’ny nandraisana ireo fihaonana an-tampony roa nisesy, Comesa sy Frankôfônia, mbola nandray ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany teo amin’ny taranja tsipy kanetibe ihany koa isika ka naha tompon-daka eran-tany ...Tohiny